नेपालभित्रै भालुको पित्तको तस्करी र बेचबिखन: केमा प्रयोग हुन्छ भालुको पित्त? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
भालुको पित्तसहित पक्राउ परेका बेँसीशहर नगरपालिका वडा नं १० का २७ वर्षीय दिनेश गुरुङलाई सोमबार प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । गए राति उनी बेँसीशहर नगरपालिकाको वडा नं ८ स्थित भिमसेनस्थानबाट पक्राउ परेका थिए ।
गत भदौमा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङबाट खटिएको टोलीले ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर ४ का ४० वर्षीय चित्रबहादुर शेरपुर्जालाई भालुको पित्त बेच्न खोजेकाकारण पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीको सुरुमा ग्राहक बनेर उनको घरमा गई भालुको पित्त भए नभएको पत्ता लगाएको थियो । ग्राहक बनेर गएका प्रहरीले भालुको पित्त रहेको थाहा पाएको र र उक्त पित्त किन्नको लागि पहिले भालुकै पित्त होकी होइन भनेर हेर्न आएको बताएका थिए ।
शेरपुर्जासँग भालुको पित्त रहेको प्रमाणित भएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले बिहिबार शेरपुर्जालाई भालुको करिव १८ ग्रामको पित्त सहित पक्राउ गरेको थियो ।
भालुको पित्तसहित पक्राउ पर्ने घटना नेपालमा नौलो होइन । भालुको पित्तसहित पक्राउ परेका घटनाहरु सुनिदै आएपनि भालुको पित्तको तस्करी के कामका लागि हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ ।
केमा प्रयोग हुन्छ भालुको पित्त?
भालुको पित्त गैरकानुनी रूपमा गोप्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने र महँगो मूल्यमा बिक्री हुने गर्दै आएको छ । नेपालबाट भने चीन र भारतको बजारमा समेत लगिने गरेको बताइन्छ ।
भालुको कलेजोमा बन्ने पित्त उसको पित्ताशयमा जम्मा हुन्छ। भालुको पित्तलाई परम्परागत चिनियाँ उपचार पद्धतिमा कामोत्तजक औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
चीनले कोरोना भाइरसको बिरामीको उपचारका लागि पनि भालुहरुको पित्त प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको थियो ।नियन्त्रणमा लिइएका जीवित भालुबाट निकालिने पित्त लामो समयदेखि परम्परागत चिनियाँ औषधिका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
ढोरपाटनमा भालुको पित्तसहित पक्राउ परेका चित्रबहादुर शेरपुर्जा
चीनमा भालुहरुको पित्तमा हुने हुने सक्रिय तत्व उर्सोडीओजाइकोलिक एसिड पित्त थैलीमा हुने पत्थर पगाल्न र कलेजोसम्बन्धी रोगको उपचारमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। तर भालुहरुको पित्त कोरोनाको उपचारमा फलदायी हुने कुनै प्रमाण छैन ।
भालुबाट पित्त निकाल्ने काम सजिलो छैन र निकाल्दा जनावरलाई असाध्यै कष्ट हुने गरेको छ।
कोरोना भाइरसको उपचारको लागि जंगली जनावर माथि निर्भर नहुने भन्दै त्यसको विरोध समेत भएको थियो ।
सन् २०१८ मा भियतनाममा पूर्वी र दक्षिणपूर्व एसियामा परम्परागत औषधिमा प्रयोग गरिने भालुको पित्तको खपतबारे गरिएको एउटा अध्ययनले उपभोक्ताहरूले पालन गरिएको भालुको पित्त सेवन गर्न कम रूचि राख्ने देखाएको थियो । तिनीहरू जङ्गली भालुको पित्तलाई बढी पैसा तिर्न इच्छुक थिए ।
नेपालमै पनि भालुको पित्त बाथरोगका लागि अचुक औषधि हुने भनेर तस्करले हल्ला फिँजाउने र बिक्री–वितरणका लागि व्यक्ति परिचालन गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपालभित्रै भालुको पित्तको तस्करी हुने गरेको छ । भालुको पित्त भन्दै नक्कली पित्त बेच्नेहरुपनि सकृय रहेका छन् ।
कामोत्तेजना बढ्ने भन्दै भालुको लिङ्ग खाने सिकारी
केही बर्ष अगाडि भालु मारेर तिनको लिङ्ग खाने एक कुख्यात सन्दिग्ध सिकारी भारतमा पक्राउ परेका थिए । भारतको एउटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गुप्ताङ्ग काटिएका भाले भालुका शवहरू फेला परेपछि अनुसन्धान थालिएको थियो ।
फिरन्ते आदिवासी समुदायका शिकारी यार्नेनले भालुको लिङ्ग सेवन गर्दा कामोत्तेजना बढ्ने विश्वासका साथ लिङ्ग खाने गरेका थिए । उनी सबैभन्दा पहिले सन् २०१३ मा पक्राउ परेका थिए। त्यतिखेर प्रहरीले लिङ्ग र पित्तको थैली निकालिएका दुईवटा भालुका शव फेला पारेका थिए।
जेलमा एक वर्ष बिताएर जमानतमा रिहा भएपछि उनी फरार भएका थिए ।